Macluumaadka Shirkadda - WEITAI
WTM Gawaarida Socdaalka
PHV Wadadii Ugu Dambeysay
MAG Safarka Gawaarida
M2X / M5X Mashiinka Swing
WSM Mashiinka Swing
Weitai Haydarooliga waa mid ka mid ah shirkadaha keena haydarooliga Shiinaha ee ugu horreeya, shirkadaha ugu horreeya ee haydarooliga ee ku takhasusay ganacsiga dhoofinta muddo tobanaan sano ah. Waxaa naga go'an inaan siino alaab iyo haydaroolid aad ufiican ganacsiyada iyo isticmaalayaasha ugu dambeeya adduunka.
Bilowgii ugu horreeyay, waxaan nahay warshad OEM, oo waxaan si tartiib tartiib ah ugu horumarinay shirkad dhammaystiran oo isku dhafan wax soo saarka, ganacsiga iyo maalgashiga. Matoorrada Haydarooliga waa mid ka mid ah wax soo saarkayada ugu muhiimsan. Marka lagu daro warshadeenna haydarooliga, waxaan nahay saamilay soo-saare tayo sare leh oo soo saaraha matoorka. Warshadahayagu waa wada shahaado ISO oo alaab keenayaashayadu waxay wada heleen shahaadooyinka CE, RoHS, CSA iyo UL. Waxaan qaabeyn karnaa oo aan u habeyn karnaa iyadoo loo eegayo sawirada si aan ula kulanno baahiyaha kala duwan ee macaamiisha.
Wax soosaarka Mootooyinka waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn matoorrada socdaalka, matoorrada lulidda iyo mootooyinka-mootooyinka. Mootooyinkayagu waxay leeyihiin qaab dhismeed casri ah waxayna bixiyaan waxtarka mugga leh, xoog sare iyo xasillooni wanaagsan oo aad uga sarreysa matoorrada tartamayaashayada. Tani waxay keentay baahida iyo soo saarida in ka badan 40,000 oo matoorrada safarka Weitai ee sanadka 2019. Mashiinka socdaalka Weitai ayaa hadda xitaa lagu daray khadka wax soo saarka ee soosaarayaasha qodista sida SANY, XCMG iyo SDLG.
Sida Shandong Haydarooliga Ururka (SDHA) Xogheynta Shirkadda iyo barxadda ballaaran ee dhoofinta ee hay'ad hawo-dhaqameed heer gobol ah, Weitai wuxuu ku faanaa inuu metelo Shiinaha oo uu adduunka la wadaago wax soosaarka hidda-sare ee tayo sare leh. Weitai Haydarooliga mar hore ayaa loo doortay inuu noqdo Shirkadda Sannadlaha ah ee Sannadlaha ah ee 2018 Shirka Sannadlaha ah iyo Madasha Wax-soo-saarka Wax-garadka ee Ururka Soo-saarista Qalabka Shandong, waxaanan isku dayeynaa inaan si joogto ah ugu dhisno guushaas.
WEITAI DIIWAAN GELINTA WEITAI